कथाः गम्बुट « Sansar News
बिष्णु ठकुरी राई
११ मंसिर २०७८, शनिबार ०८:५५
उसको नाउँ जितेन ! !सबै साथीहरू उसलाई जितु भनेर बोलाउने गर्थे । जन्म र मृत्यु के हो भन्ने विषयमा ज्ञान नहुँदा नै उसकी आमाको देहान्त भएको थियो । बाबु भएता पनि आमा नभएको टुहुरो केटा । वर्ष दिन नपुग्दै बाबुले अर्की स्वास्नी याने सानी आमा भित्राए । केही महिना सम्म त ठीकै थियो तर सानीआमाले छोरो जन्माए पछि जितुको लालनपालनमा कमी आयो । सानी आमाले अर्को सन्तान पाएपछि बाबु पनि साना बाबुको भुमिका निभाउन वाध्य भए सायद। बल्लतल्ल सात बर्षको उमेरमा गाउँ कै प्राथमिक पाठशालामा भर्ना गरिदिए । तर त्यस बेला पाठशालामा चाहिने खाता किताब पेन्सिल आदि भने मुश्किलले किनिदिन्थे बाबुले । लेख्ने पेन्सिल नहुँदा साथीहरुले उनेरले आफ्नो पेन्सिलको ठुट्टे टुक्रा दिन्थे ।
अहिले जस्तो प्राथमिक पाठशालामा सरकारी सहुलियत पाइदैँन थियो । अहिले त दिउँसोको खाना, खाता किताब, युनिफर्म, जुत्ता सबै पाउने प्रावधान छ । ।पाठशाला पछि घरमा काम पनि गर्नु पर्ने, नानी हेर्नु पर्ने, अलिकति काम बिग्रे गाली र कुटाई खाएर भोको पेट सुत्न पर्ने जितुलाई। यसरी नै दिन महिना बित्दै गए ।
जसरी तसरी जितु दोस्रो कक्षामा पुग्यो । बर्खायाममा प्रायः साथीहरू गम्बुट लाएर स्कूल आउने, कोही पानी जुत्ता तर जितुलाई एक जोडी चप्पल सम्म थिएन । सबैले गम्बुट लाएर स्कूल आउने साथीहरू देखेर उसलाई पनि गम्बुट लाउने रहर भयो। एकदिन । आफ्नो बाबुलाई गम्बुट किनि मागे । उसको बाबु कुनै एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे । काम र जमाना अनुसारको तलबले एक जोडी गम्बुट किनिदिन सक्ने तर कान्छी स्वास्नीको डरले आफ्नो पहिलो छोराप्रति आफ्नो कर्त्तव्य निभाउन सकेका थिएनन् । र पनि छोरालाई यसपालिको तलब पाएपछि किनिदिने वचन दिए । त्यो दिन जितु धेरै खुशी भएको थियो । बाबुले तलब पाएपछि रातो रगंको गम्बुट किनि माग्छु भनेर मनमनै रमायो ।
आज १ तारिख बाबुले तलब पाउने दिन । भोलि त बाबुले गम्बुट किनेर ल्याउनु हुनेछ। मीठो सपना देख्यो जितुले । बिहान भान्सा घरमा बाबुले सानो आमालाई भने : आज त म जितेनलाई एक जोडी गम्बुट किनिदिन्छु भनेर मात्रै के भनेथ्यो सानीआमाले ठूलो स्वरमा कुन खुट्टामा लाउँछ तेस्रले गम्बुट तेही खुट्टा भाँचिदिनेछु भन्दै बाबुलाई कराउन थालिन्। भान्सा घरको बाहिरी भित्तामा अडेस लागेर सुनिरहेको जितु रुँदैं भागेर बाख्राको खोर मुनी लुक्न पुग्यो । उसको गम्बुट लाउने रहर सानी आमाको कर्कश आवाजले चक्नाचूर बनायो । आँखाबाट आएको बलिन्द्रधाराले गम्बुट लगाउने रहर, एउटा बाल्यकालको मीठो सपना बगाएर लग्यो। विचरा जितु !
-साई नन्दन, दिलाराम,खर्साङ
कविताः संबिधानमा समाजवाद छ
लघुकथाः गल्ती कि सही ?
पाँच कोपिला\_ डाली
लघुकथा: आ-आफ्नो परम्परा